फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा कारोबार हुँदैछ आज ? - Everest Dainik - News from Nepal
फेरि बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा कारोबार हुँदैछ आज ?
काठमाडौंः नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य १ सय रुपैयाँले बढेको छ । बिहीबार प्रतितोला ७४ हजार ७ सय निर्धारण गरिएको सुन आज बढेर ७४ हजार ८ सय पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
त्यस्तै आज छापावाल सुनको मूल्य पनि बढेको छ । बिहीबार प्रतितोला ७४ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज ७४ हजार ५ सय निर्धारण गरिएको छ ।
चाँदीको मूल्य पनि आज बढेको छ । बिहीबार प्रतितोला ८ सय ८५ रुपैंयामा कारोबार भएको चाँदी आज ५ रुपैंयाले बढेर ८ सय ९० निर्धारण गरिएको महासंघले जनाएको छ ।